Maxay wadamada afrika u bixiyaan cashuurta gumeysiga Faransiiska inkasta oo ay xornimadooda qaateen? - Mu'asasada Afrikhepri
jimco, janaayo 22, 2021
Maxay dalalka Afrika u bixiyaan cashuurta gumeysiga ee Faransiiska inkastoo ay madaxbannaan yihiin?
18 daqiiqo akhri
Lma ogeyd? Xitaa maanta, dalal badan oo Afrikaan ah waxay sii wadaan inay bixiyaan canshuuraha gumeystaha Faransiiska, inkasta oo ay xorriyad qaateen. Waddamada cusub ee madaxbannaan waxay lagama maarmaan ahayd in la helo xal u dhaxeeya Faransiis. Sylvanus Olympio, oo ah madaxii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Togo, oo ah dal yar oo ku yaal Galbeedka Afrika, ayaa xal u heley in ay dejiyaan Faransiiska:
Ma aha oo doonaya in ay sii wadaan si ay u mari saldanad Faransiis, wuu diiday inuu saxiixo heshiis dejinta ee la soo jeediyey by De Gaule, laakiin isku raacay in laabtay bixiyo sanadlaha ah in France for faa'iidooyinka wax-u helay intii lagu jiray gumaysigii Faransiis.
Kuwani waxay ahaayeen shuruudaha kaliya ee Faransiisku u diidan inaysan burburin dalka ka hor inta uusan ka tegin. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha lagu qiyaasay Faransiisku wuxuu ahaa mid aad u ballaaran oo dib u bixinta "deymaha gumeysiga" ayaa ku dhawaad ​​40% miisaaniyadda waddanka ee 1963.
Sidaa darteed, xaaladda dhaqaale ee madax banaan Togo oo keliya ahaa mid aad u deganayn, iyo in si inaan ka gudbo xaaladda this, Olympio go'aansadeen in ay ka baxaan nidaamka lacagta qotomiyey by gumeysiga France FCFA ah (Franc ah deegaanada Faransiis ee Africa) waxayna abuurtay lacagta dalka.
The January 13 1963, saddex maalmood ka dib, wuxuu bilaabay in uu daabaco ee cusub, kooxda askar (taageeray by France) qabtay oo lagu dilay madaxweynihii ugu horeeyay ee loo doortay madax banaan Africa: Olympio waxaa la dilay by a hore ee Faransiiska Legionnaire, saajin ciidankii Etienne Gnassingbe, kadis ah, helay waqti ah dollars premium 612 Safaaradda degaanka Faransiis guusha ee uu shaqada.
Riyada Olympi wuxuu ahaa in la dhiso wadan madaxbannaan oo madaxbannaan. Laakiin fikradu ma aysan aheyn mid ku habboon rabitaanka Faransiiska.
The June 30 1962, Modiba Keita, madaxweynihii ugu horeeyay ee Jamhuuriyadda Mali, ayaa sidoo kale ay go'aansatay in ay ka baxaan nidaamka lacagta FCFA (rogay 12 cusub ee dalalka Afrika oo madax bannaan).
Indeed, Madaxweynaha Mali, ku tiirsan dheeraad ah xagga dhaqaalaha hantiwadaag, waxa uu ahaa cad in gumaysigii oo weli jirin heshiis la France, ayaa noqday dabin, rar la saaray horumarka dalka.
19 Nofeembar 1968, sida Olympio, Keita ayaa noqon doonta dhibanayaal afduub ah oo ay hoggaamiyaan mid kale oo hore oo Faransiis ah oo ku takhasusay Arrimaha Dibedda, Iskuduwaha Moussa Traoré.
Dhab ahaantii, inta lagu jiro xilliga qasan marka Africa la dirirayay inay ka xor harqoodka gumaysigii reer Yurub, France isticmaali doonaa in dhowr jeer oo hore xiriir la leh calooshiis Dibadda Legion in la sameeyo ururshay dhuftay howlgallada ka dhanka ah Madaxweyne cusub ee la doortay:
1er Janaayo 1966, Jean-Bedel Bokassa, oo horay u ahaan jirey Faransiiska, ayaa afduubay David Dacko, oo ahaa madaxii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Bishii Janaayo 3, 1966, Maurice Yaméogo, madaxweynihii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Upper Volta, oo hadda loo yaqaan Burkina Faso, waxaa dhibane u ahaa dharbaaxo uu ku dhuftay Aboubacar Sangoulé Lamizana, oo horay uga tirsanaan jiray ciidammada Faransiiska oo la dagaallamay ciidammada Faransiiska. Indonesia iyo Aljeeriya oo ka dhan ah dalalkan xorriyadda
The October 26 1972 Kerekou oo ahaa madaxa waardiyayaasha ammaanka Madaxweynaha Hubert tenegga, madaxweynihii ugu horeeyay ee Jamhuuriyadda Benin ah, kula macaamilooday afgambi ka dhan ah Madaxweynaha, ka dib markii dhigata dugsiyada ciidamada Faransiiska 1968 1970.
Dhab ahaantii, in sannadihii ugu danbeeyay 50, 67 xaaladda guud ee darbo ka dhacay dalalka 26 ee Africa, 16 dalalka kuwanu waa deegaanada hore ee Faransiiska, taas oo macnaheedu yahay 61% ka mid ah oo jirijirtay in Africa ayaa bilaabay in deegaanada hore ee Faransiiska.
Tirada istaroog ee qaaradda Afrika dalku wuu ku badan yahay
Wadamada kale ee Afrika
Number of coup d'état
WADARTA (1 + 2)
Maaddaama tirooyinkaas muujinayaan, Faransiiska si ba'an ayuu u quustay, laakiin firfircooni ku heysta inuu xoog ku haysto deegaanadeeda iyada oo aan loo eegin sida, qiimo kasta ha ahaato.
Bishii Maarso 2008, madaxweynihii hore ee Faransiiska Jacques Chirac ayaa yiri:
"Marka laga reebo Afrika, Faransiiska ayaa hoos u dhigi doona heerka saddexaad ee [adduunka]"
Jacquir Chirac François Mitterrand horey u soo saartay 1957 in: "Afrika la'aanteed, Faransiisku taariikh uma lahayn taariikhda qarnigii sagaalaad"
Hadda sidii aan qori this article dalalka 14 Afrika ayaa lagu qasbay by France, iyada oo loo marayo heshiis gumeysiga, si 85% keydka ay bangiga dhexe ee France ay ka taliyaan ee Wasaaradda Faransiis ah Maaliyadda. Ilaa hadda, 2014, Togo iyo 13 dalal kale oo Afrikaan ah ayaa weli ah inay bixiyaan deynta gumeysiga ee Faransiiska. Hoggaamiyayaasha Afrika ee diidaya waa la dilay ama dhibanayaasha afduubka. Kuwa addeeca waa la taageeraa oo abaal marin lagu abaal mariyaa Faransiiska oo leh qaab nolol wanaag ah, halka dadkoodu ay u adkeeyaan murugada iyo rajada.
Nidaamka xun ee noocan oo kale ah, ayaa lagu cambaareeyay Midowga Yurub, laakiin Faransiisku diyaar uma aha inuu sameeyo iyada oo aan haysan nidaamkan gumaysiga kaas oo isaga bixiya lacag caddaan ah oo ku saabsan balaayiin doolar oo dollar ah oo Afrika ah, iyo sano.
Waxaan inta badan ku eedeynaa hoggaamiyayaasha Afrikaanka musuqmaasuqa waxayna u adeegaan danaha dalalka reer galbeedka, laakiin waxaa jira sharaxaad cad oo ku saabsan habdhaqankan. Waxay u dhaqmaan habkan sababta oo ah waxay ka baqayaan in la dilo ama ay noqdaan dhibanaha afduubka. Waxay doonayaan in ay isku daraan qaran awood leh si ay naftooda u badbaadiyaan haddii ay dhacdo gardaro ama dhibaato. Laakiin, marka laga reebo ilaalinta saaxiibtinimo, ilaalinta galbeedka waxaa badanaa la bixiyaa marka laga reebo in ay u adeegto dadkooda ama danaha dalalka.
Hoggaamiyayaasha Afrika ayaa ka shaqeyn doona danta dadkooda haddii aysan si joogta ah u dhibaateynin ayna ku cabsi galin wadamada gumeysiga.
In 1958, cabsadeen reer cawaaqibka uu ku soo xulan xornimada ka dhanka France, Leopold Senghor Sedar ayaa yiri: "Doorashada ka mid ah dadka Senegal, waa madax-bannaanida ay doonayaan in ay dhacaan oo keliya in la saaxiibin Faransiiska, ma ahan muran. "
Faransiiska ayaa sidaas darteed aqbalay "madaxbanaanida waraaqda" ee deegaanadeeda, laakiin waxa uu saxiixay heshiisyo wada-shaqeyn oo is barbar socda, isagoo tilmaamaya nooca xiriirka ay la leeyihiin France, gaar ahaan xiriirka lacagta Franc), nidaamka waxbarashada Faransiiska, heshiisyada milatari iyo doorbidinta ganacsiga.
Waa kuwan qaybaha muhiimka ah ee 11 ee sii socoshada heshiiska gumeysiga tan iyo sannadaha 1950:
1.Deynta gumeysiga ee faaiidooyinka Faransiiska
Dalalka cusub "madaxbannaan" waa inay bixiyaan kharashka kaabayaasha ee ay Faransiisku dalka ka joogaan inta lagu jiro colonization.
Wali waa inaan helaa faahfaahinta ku saabsan qaddarka, qiimeynta faa'iidooyinka gumeysiga iyo shuruudaha lacag bixinta ee dalalka Afrika, laakiin waxaan ka shaqeyneynaa (naga caawinta macluumaadka).
2.Gawaarida si toos ah ee kaydka qaran
Dalalka Afrika waa inay dhigaan kaydkooda kaydkooda qaran ee Faransiiska ee bangiga dhexe.
France ayaa lagu qabtay kaydka qaranka ee afar iyo toban dal oo Afrikaan ah tan iyo 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo -Brazzaville, Guinea Equatorial iyo Gabon.
Siyaasadda lacagta ee xukuma sida noocyada kala duwan ee wadamada waa mid fudud maxaa yeelay waxaa maamula Miisaaniyadda Faransiiska, iyada oo aan la tixraacin maamulka canshuurta dhexe sida UEMOA ama CEMAC. Sida ku cad qodobada heshiiska kaas oo lagu fuliyey bangiga dhexe ee CFA ah, Bank kasta Dhexe ee dal kasta oo Afrikaan ah waxaa waajib ku ah in ay sii ugu yaraan 65% of kaydka ah ajnabiga ah ee ah "hawlgallada koonto" lagu qabtay Faransiiska Faransiiska, iyo sidoo kale 20% kale si ay u daboosho waajibaadka maaliyadeed.
Bangiga dhexe ee CFA ayaa sidoo kale soo rogay saqaf deyn ah oo lagu siiyay dal kasta oo xubin ka ah 20% dakhliga guud ee waddanka sanadkii hore. Xitaa haddii BEAC iyo BCEAO ay leeyihiin xarun alaabada ah oo ay la socoto Qasnadda Faransiiska, tas-hiilaadka deynta ah waxay ku xiran tahay ogolaanshaha Miisaaniyadda Faransiiska. Ereyga ugu dambeeya waa tan Miisaaniyadda Faransiiska ah oo maalgashatay kaydka shisheeye ee wadamada Afrika magaciisa ku leh Paris Stock Exchange.
Gaaban, in ka badan 80% ee kaydka sarrifka ah ee dalalkaas Afrika ayaa lagu dhigayaa "xisaabaadka hawlgallada" ay maamusho Qasnadda Faransiiska. Labada lambar ee CFA waa magaca Afrikanka, laakiin ma laha siyaasad lacageed. Dalalka qudhooda ma oga, looma ogeysiin, intee le'eg kaydka ajnabiga ee ay hayso Faransiiska Faransiisku iyaga iska leh iyaga ama koox ahaan.
Hantida maalgalinta ee miisaaniyadan Faransiiska ah waxaa loo malaynayaa in lagu daro kaydka sarrifka ajnabiga ah, laakiin ma jirto xisaabin lala xiriiriyo bangiyada ama waddamada, ama faahfaahinta isbedeladan. "Kaliya koox yar oo ka mid ah saraakiisha sare ee lacagta Faransiiska ayaa ogtahay qadarka" xisaabaadka ganacsiga "halkaasoo maaliyadahan la maalgelinayo; haddii ay jirto faa'iido maalgashigan; waa ka mamnuuc inay bixiyaan macluumaadkaan bangiyada CFA ama bangiyada dhexe ee wadamada Afrika. "Qoraa Dr. Gary K. Busch
Waxaa lagu qiyaasaa in Faransiiska ay maamusho ku dhawaad ​​balaayiin lacag ah oo Afrikaan ah oo kaash ah oo lacag ah oo aan lacag aheyn, oo waxba ka qaban maayo iftiinka dhinaca mugdiga ah ee boqortooyadii hore.
Ujeedada ayaa ah: Dalalka Afrika ma heli karaan lacagtan.
Faransiiska ayaa u oggolaanaya inay helaan 15% oo kaliya ee lacagtooda sanadkiiba. Haddii ay u baahan yihiin in ka badan, wadamada Afrika waa in ay amaahiyaan, qiimaha ganacsiga, 65% lacagta ay ku haystaan ​​Khasnadda Faransiiska.
Si looga dhigo wax aad u naxdin badan, Faransiisku wuxuu ku dhejiyaa xaddiga lacagta ee dalalka ay ka amaahan karaan kaydka. Qalabka waxaa lagu dejiyaa 20% dakhliga guud ee sanadkii hore. Haddii wadamada ay u baahan yihiin in ay amaahdaan wax ka badan 20% lacagahooda, Faransiisku wuxuu leeyahay diidmo.
Madaxweynihii hore ee Faransiiska Jacques Chirac ayaa dhowaan ka hadlay dhaqaalaha waddamada Afrika ee bangiyada ee Faransiiska. Halkan waa fiidiyoo ka hadlaya nidaamka hawlgalka Faransiiska. "Waa in aan daacad u nahay oo aqoonsannaa in badan oo ka mid ah lacagta bangiyada noogu soo baxday si cad uga soo jeeda qaaradda Afrika".
3.Xaq u yeelashada mudnaanta khayraadka cayriin ama dabiiciga ah ee laga helo dalka
Faransiiska ayaa mudnaanta koowaad siineysa iibsiga dhamaan khayraadkii dabiiciga ahaa ee dhulkii hore ee gumeysiga. Waana diidmo ah in dalal Afrikaan ah loo ogolaado inay raadsadaan lamaanayaal kale.
4.Mudnaanta danaha Faransiiska iyo shirkadaha qandaraaska dadweynaha iyo dhismayaasha dadweynaha
In lagu abaal-mariyo qandaraasyada dadweynaha, shirkadaha Faransiiska waa in loo tixgeliyaa meesha ugu horeysa, ka dib markii suuqyada dibadda loo tixgeliyo. Xaqiiqada ah in dalal Afrikaan ah ay heli karaan deeqaha dhaqaale ee meelo kale meelna laguma xisaabin.
Natiijo ahaan, badi deegaanadii hore ee Faransiiska, dhammaan shirkadaha ugu waaweyn iyo ciyaartoy dhaqaale waxay ku jiraan gacanta Faransiiska. Côte d'Ivoire, tusaale ahaan, shirkadaha Faransiisku waxay leeyihiin oo maamulaan dhammaan adeegyada guud ee bulshada - biyaha, korontada, telefoonka, gaadiidka, dekadaha iyo bangiyada waaweyn. Ku celi ganacsiga, dhismaha iyo beeraha.
Ugu dambeyntii, sida aan ku qoray maqaal hore, Afrikaanku waxay hadda ku nool yihiin qaaradda oo ay leeyihiin Yurubiyaanka!
5.Xaq u yeelashada xuquuqda ah in la siiyo qalab millatari iyo tababaro saraakiil millatari oo ka socda dalalka
Nasiib darro nidaam cusub oo deeq waxbarasho, deeqo, iyo heshiisyada "difaaca difaaca" ee ku xiran heshiiska gumeysiga, Afrikaanka waa inay u diraan askartooda sarsare ee Faransiiska ama xarumaha milatariga Faransiiska.
Xaaladda ku sugan qaaradda waa sida Faransiisku u tababaray oo ay ku quudiyeen boqolaal, xitaa kumanaan khiyaano ah. Waxay u hoydaan inta aanay u baahnayn, oo ay dhaqdhaqaajiyaan marka loo baahdo abaabulo ama ujeedooyin kale!
6.Xaq u lahaanshaha Faransiiska in ciidamo horay loo geyn lahaa lagana soo dhexgalo dalka si ay u difaacaan danahooda
Sida ku qoran magaca "Heshiisyada Difaaca" oo ku xiran heshiiska gumeysiga. Faransiiska waxay xaq u leedahay in ay soo dhexgalaan ciidamada militariga ah ee wadamada Afrika, iyo sidoo kale in ay si joogta ah u joogaan ciidammada joogtada ah ee xarumaha milatariga iyo rakaabka, oo ay si buuxda u maamulaan Faransiiska.
Xarumaha milatariga Faransiiska ee Afrika
Markii Madaxweynaha Laurent Gbagbo ee Côte d'Ivoire isku dayey in uu soo afjaro ka faa'iidaysiga Faransiiska ee dalka, France ayaa abaabulay heshiis afduub ah. Intii lagu gudajirey wadiiqada dheeriga ah ee Gbagbo ka baxsan awoodda, taangiyada Faransiiska, helikabtarrada dagaalka iyo ciidamada khaaska ah ayaa si toos ah u soo dhexgalay iskahorimaadka, ka soo tuuray dad rayid ah waxayna dileen qaar badan oo ka mid ah.
Si aad ku dari cay dhaawac, France arko in bulshada ganacsatada Faransiis markaas laga badiyay dhowr milyan oo doolar oo lagu ordaayo in uu ka tago Abidjan 2006 (halkaas oo ciidanka Faransiis Xasuuqay 65 shacab aan hubeysnayn oo ku dhaawacmay 1200 kale.)
Ka dib guushii afduubka Faransiiska, iyo wareejinta awoodda Alassane Ouattara, France waxay waydiisatay xukuumadda Ouattara inay magdhow siiso bulshada Ganacsiga Faransiiska ee khasaaray intii lagu jiray dagaalka sokeeye.
Xaqiiqdii, xukuumadda Ouattara ayaa laba jeer bixisay wixii ay sheegeen markii ay ka tageen.
7.Waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee Faransiiska luuqadda rasmiga ah ee dalka iyo luuqada waxbarashada
Haa. Waa inaad ku hadashaa Faransiiska, luqada Molière! Luqadda Faransiiska iyo ururkii kala-soocida dhaqanka ayaa la abuuray. Waxaa lagu magacaabaa "Francophonie" oo ururiya dhowr laamood iyo ururrada la xidhiidha oo ay maamusho Wasiirka Faransiiska ee Arrimaha Dibadda.
Sida lagu muujiyey maqaalkani, haddii Faransiis yahay luuqadda kaliya ee aad ku hadasho, waxaad heli doontaa in ka yar 4% aqoonta aadanaha iyo fikradaha. Waa wax xadidan.
8.Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah isticmaalka lacagta gumeysiga France ee FCFA
Tani waa qaadashada lacagta rasmiga ah ee Faransiiska, sida nidaamka xun, ayaa lagu cambaareeyay Midowga Yurub, laakiin Faransiisku diyaar uma aha inay sameeyaan nidaamkan gumaysiga oo bixinaya lacag caddaan ah Doolarka Afrika, sanadka oo dhan.
Inta lagu jiro hordhaca lacagta euroda ee Europe, dalalka kale ee yurubiyaanka ah waxay soo heleen nidaamka hawlgalka Faransiiska. Dad badan, gaar ahaan wadamada Waqooyiga Yurub, waa la yaabay waxayna soo jeediyeen Faransiis in ay ka takhalusaan nidaamka, laakiin aan guuleysan.
9.Waxyaabaha lagama-maarmaanka u ah inay soo diraan warbixinta sannadlaha ah ee Faransiiska ee dheelitirka iyo kaydka
Warbixin la'aan, lacag la'aan. Xilligan oo kale xoghayaha bangiyada dhexe, iyo xoghayaha maaliyadda sanadlaha ah ee wasaaradaha maaliyadeed ee hore ee gumeysiga ayaa waxaa bixiya bangiga dhexe ee dhexe / maaliyadda.
10.Dib-u-ceshad si ay u galaan xulafo milatari waddan kale, haddii aysan ogolaan Faransiiska
Wadamada Afrika guud ahaan waa kuwa leh xulafada ugu yar ee isbaheysiga ah ee dowladaha. Dalalka intooda badani waxay leeyihiin xulafo militari oo ay la wadaagaan kuwii hore (funny, laakiin ma sameyn kartid!).
Xaaladaha ay jecelyihiin isbahaysiga kale, Faransiisku si fiican ayey u ilaaliyaan.
11.Waajibaadka la xiriirta Faransiiska xaalad dagaal ama dhibaatooyin caalami ah
In ka badan hal milyan oo askari Afrikaan ah ayaa u dagaallamay guuldaradii Naziism iyo fashiistii intii lagu jiray dagaalkii labaad ee aduunka.
Ay ka qayb qaateen waxaa inta badan iska indho ama la yareeyo, laakiin marka aad u malaynayso ku qaatay kaliya 6 todobaad Germany inay garaacdo France ee 1940, France og yahay in Afrika ay noqon kartaa mid waxtar leh oo aad xajisaan "waynaanta of France" in mustaqbalka.
Waxaa jira wax aad u dhimman oo ku saabsan xiriirka Faransiiska ee la leh Afrika.
Ugu horreyntii, Faransiiska ayaa si weyn u qabatimay bililiqaysiga iyo dhiig-miirashada Afrika tan iyo wakhtigii addoonsiga. Kadibna waxaa jira la'aanta dhamaystiran ee hal-abuurka iyo fikradda Faransiiska Faransiisku in ay ka fekeraan wixii ka dambeeya taariikhda iyo dhaqanka.
Ugu dambeyntii, France ayaa hay'adaha 2 yihiin in gebi ahaanba xayiray ee la soo dhaafay, ay deggan yihiin "saraakiisha sare ee" khayaano iyo psychopathic kan Fidiyay cabsan apocalypse haddii France ahaayeen in loo keeno in la beddelo, oo rajadiisuna ay tixraac fikirka had iyo jeer yimaado nasjonalromantiske qarnigii 19ème. Waxay kala yihiin: Wasiirka Maaliyadda iyo Miisaaniyadda France iyo wasiirka arimaha dibada ee France.
Labadan hay'adood maaha kaliya khatar ku ah Afrika, laakiin waxay naftooda u yihiin Faransiiska.
Waxaa inoo ah in aan xoreeyno Afrika, anagoo aan waydiisaneynin ogolaansho, maxaa yeelay weli ma fahmi karo tusaale ahaan sida 450 Faransiis Faransiis ah oo ku sugan Ivory Coast ay xakamayn karaan tirada dadka 20 Million dadka?
Dareenka koowaad ee dadka marka ay bartaan jiritaanka canshuurta gumeysiga Faransiiska badanaa waa su'aal: "Ilaa waqtiga"
Sida la barbardhigo taariikhi ah, France sameeyey Haiti bixin dhigma casriga ah ee 21 billion 1804 in 1947 (ku dhawaad ​​qarni iyo badh) ee khasaaraha sababay in ay slavers Faransiis soo socda la baabiiyo addoonsiga iyo xoraynta dadka adduunka Haitian.
Dalalka Afrika ayaa bixiyay canshuurta gumeysiga tan iyo sannadkii hore 50, sidaas darteed waxaan qabaa qarashka qarashka badani waa mid aad u badan.
"Waxaan doorbideynaa xorriyadda faqriga ee kufsiga addoonsiga". SEKOU TOURE
Maqaalka asalka ah: http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/
Tarjumay kooxda isgaarsiinta Khariidad wadajir ah
Atlas weyn ee boqortooyooyinkii gumeysiga - laga soo bilaabo gumeysigii ugu horreeyay illaa gumeysigii (XNUMXaad-XNUMXaad ...
4 cusub oo ka yimid € 38,00
5 waxaa laga isticmaalay € 32,95
Iibso € 38,00
Taariikhda gumeysiga. Laga soo bilaabo gumeysigii ilaa xorriyadda (qarnigii XNUMX-XNUMXaad) (UHREFER.)
Iibso € 9,99
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Janaayo 21, 2021 6:38 am
Qi, tamarta ku bogsata - Dukumiinti (2009)